ओली हैन कोली : मोदीले किन भनेका होलान् प्रमलाई ‘कोली जी’, त्यो पनि एक पटक हैन दुई पटक – MySansar
ओली हैन कोली : मोदीले किन भनेका होलान् प्रमलाई ‘कोली जी’, त्यो पनि एक पटक हैन दुई पटक
Posted on May 12, 2018 May 12, 2018 by Salokya
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई दिने नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन तीन ठाउँमा भाषण ठोके। पहिलो भाषण जनकपुरमा जानकी मन्दिरमा पूजा गरिसकेपछि। दोस्रो पटक बाह्र बिघा मैदानमा ‘नागरिक अभिनन्दन’ नाम दिइएको आमसभामा। तेस्रो चाहिँ काठमाडौँको संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा। नयाँ दिल्लीदेखि लामो फ्लाइटमा जनकपुर आएको भएर थाकेर हो कि किन हो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीले कोली पो भने जानकी मन्दिर परिसरमा। भारतका र नेपालका सबैजसो टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको भिडियोमा मोदीले भने, ‘नेपालके प्रधानमन्त्री तथा मेरे भाइसाब आदरणीय कोलीजी’। हेर्नुस् त भिडियो
भिडियोमा हेर्नुस् उनले एक पटक हैन दुई दुई पटक ओलीलाई ‘कोली’ भनेका छन्।
धन्न, उनले कोली भनेछन्। सुन्दा क्रिकेटर विराट कोहली जस्तो सुनिन्छ। धन्न ‘भोलि’ जी भनेनन्। जिब्रो चिप्लेकै भए जोली भन्न सक्थे, डोली भन्न सक्थे। बोली लर्बरेकै भए गोली, चोली, झोली, टोली जे पनि हुनसक्थ्यो।
के रहेछ त कोलीको अर्थ भारतमा? खोज्दा यस्तो भेटियो-
उनकै बोलीमा लोली मिलाएर हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि मोदीलाई गोदी, घोदी भन्नुहोला कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो होला। तर ओलीजी थोडी त्यस्तो बदला लिनेवाला पर्नुहुन्छ। उहाँले स्पष्ट रुपमा मोदी उच्चारण गर्नुभयो।
काठमाडौँमा भने मोदीजीले हाम्रा प्रमलाई कोलीजी भन्नुभएन, ओलीजी नै भन्नुभयो।
5 thoughts on “ओली हैन कोली : मोदीले किन भनेका होलान् प्रमलाई ‘कोली जी’, त्यो पनि एक पटक हैन दुई पटक”
केपी र ओली mix भएर कोली भाको होला … लसुन र अदुवा …लदुआ भाको जस्तै हाहा… दिमाग मा केपी मुख मा ओली भन्ने बेला कोली
हिन्दि होईन आफ्नै भाषा र संस्कृति भयका अनेकौं जातिको बसोबाश भयको तराईमा बिहार बात आयका हिन्दि भाषा बोल्ने नेपालको नागरिकता लिय पनि जय नेपाल होईन जय भारत भन्ने समुहले तराईनै नेपाल बात अलग्यायर दछिनमा भारत उतरमा पहाडीको नेपाल भयको मध्यदेस बनाउने आशय लियका कथित मधेशाबादिहरुले ओलीको बिरोध झापामा उसले कसैको टाउको कातेकैले गरेको होईन ओलीले मधेशाबादिले आफ्नो प्रथम नेता तथा सहिद मानेको रघुनाथ ठाकुरको सपना साकार बनाउने प्रयाशमा बाधा पुर्यायकोले मात्रै हो/
अब केहि सब्द रघु नाथ ठाकुरको बारेमा/ नेपाल संयुक्त रास्ट्र संघको सदस्य बनेको लगतै रघुनाथ ठाकुरले मधेशबादी समुह बनायर तराईलाइ भारतमा मिलाउने र मिलाउन नसके तराइलाई नेपाल र भारतको अलग्गै “मध्यदेस” बनाउने प्रयास गरेको थियो/ उसले आफ्नो प्रयासमा भारतको समर्थन र सहयोग पाउन भारतको दिल्लीको सदन अगाडी धर्ना बसेर आत्म दाहाको प्रयास समेत गरेको थियो/ बिरेन्द्रको पालामा रघुनाथ ठाकुर मारियो/ त्यो नेपाल द्रोही रघुनाथ ठाकुरलाई मधेशाबादिहरु आफ्नो महान नेता र प्रथम सहिद माने बाटै स्पस्ट हुन्छ मधेशाबादिले के चाहे खोजेको छ/
रघुनाथ ठाकुरले तराई नेपाल बात अलग्याय्ने कुरा उल्लेख भयको ४ वटा किताव लेखेको र तेस्को केहि पन्नाहरु इन्टरनेटमा अहिले पनि छन्/ मधेशबाद के हो भन्ने कुरा बुझाउने ती पुस्तकहरु माईसन्सार ले बा कसैले सार्वजनिक गरेमा कुरा नबुझेर मधेशबादी भयकाहरु सचिञ्छन जस्तो लाग्छ/
आन जोशी says:
कोहली भन्ने थर हुनछ इंडिया मा मैले त कोहली सुने है
कोइली भन्न खोजेको होला नि
अरे मोदी जी ले तो कोलि को कोलि भनी लिनु भो . यसमा गलफत्ती किन ? कोइला जस्तै कालो छ यो कोलि /
अरे कसो गैंडा पुराण वाला कोलि जी , वा पानी जहाज वाला कोलि जी वा एरो प्लेन कोलि जी भनी लिनु भएनछ /
अरे यो ज्यानमारा झापाली टाउको काट्ने वाला ओली हो / छविलाल लाइ पनि मात गर्ने चोर ओली हत्यारा